UniProyecta - Imfundo yabo bonke ubudala
Izincwadi zeTestamente Elisha zeBhayibheli
Sawubona mfundi othandekayo, siyakwemukela UniProyecta. Lapha sicabanga lokho imfundo kanye namasiko kufanele kube mahhala kuwo wonke umuntu, owesilisa noma owesifazane, ingane noma umuntu omdala. Ngakho-ke, kuleli khasi uzothola i- ulwazi ebesilokhu sikwenza ngendlela yama-athikili ukukusiza ekuqeqeshweni kwakho. Uma ungaqiniseki ukuthi ungakuthola kanjani okudingayo, sizokusiza ngesifinyezo esifushane salokho ozokuthola kuleli sayithi.
Enye yamandla ethu ulimi lwesiFulentshi, esilufunde sibonga izincwadi nokuhambela kulo IFrance neCanada. Kulesi sigaba sinikeza izifundo kuwo wonke amazinga: kusuka ekuqaleni kuya kokuthuthukile kakhulu.
Izinyanga zonyaka ngesiFulentshi
Iziphakamiso zaseFrance: ziyini?
Amahora ngesiFulentshi: usho kanjani kuwo?
Izinombolo zaseFrance kusuka ku-1 kuye ku-1000
Tento French: uhlu, izivivinyo kanye conjugation
Izixhumi zaseFrance: uhlu nezibonelo
Izinhlamvu zesiFulentshi nokuphinyiswa kwayo
Namuhla akunakwenzeka ukungadingi ulwazi lwesiNgisi. Kuhlelo ithelevishini, ukuxhumana nomphakathi nemidlalo yevidiyo uzothola izingxenye noma amagama athathwe esiNgisini. Ngakho-ke, sizilungiselele lezi zihloko funda isi-english futhi uthuthukise izinga lakho.
Imibala in English
Izinsuku zesonto ngesingisi
Thanda imishwana ngesiNgisi
Izinyanga zonyaka ngesiNgisi
Tandziso in English
Izinombolo zesiNgisi kusuka ku-1 kuye ku-1000
Onkamisa ngesiNgisi: Ifonetiki nokuphimisela amagama
The tento in English
Izichasiso zokuchaza umuntu ngesiNgisi
Ngokwemvelo, akuzona zonke eziyisiNgisi noma isiFulentshi, kunezinye izilimi eziningi ezinhle kakhulu futhi eziwusizo ongazifunda. IsiRashiya, isiShayina, isiJapane noma isiNtaliyane yizibonelo ezimbalwa nje zalokho esikugcinile.
Izinombolo zesiJalimane kusuka ku-1 kuye ku-1000
Izinombolo zesi-Arabhu kusuka ku-1 kuye ku-1000
Izinombolo ngesiBasque kusuka ku-1 kuye ku-100
Izenzo zesiCatalan: uhlu nokuhlanganiswa
Izixhumi zaseJalimane: uhlu nezibonelo
Izabizwana zesiPutukezi: ukuphinyiselwa kanye nezibonelo
Izinombolo zaseRussia nokubiza amagama
Izinombolo zesiShayina kusuka ku-1 kuye ku-100
Izinombolo ngesiPutukezi kusuka ku-1 kuye ku-100
Izinombolo zaseJapan kusuka ku-1 kuye ku-50
Izinombolo zase-Italy kusuka ku-1 kuye ku-100
Manje sesibuyela esigabeni samasiko, ikakhulukazi sizobheka imvelaphi yethu, iGrisi lasendulo. Akukho okungcono kunendaba emnandi yonkulunkulu namaqhawe okusula ingqondo nokufunda nokhokho bethu.
Inganekwane ka-Achilles nesithende sakhe
Inganekwane kaPrometheus noPandora
Inganekwane Yokubhala Ngomakhalekhukhwini
Izinganekwane ZamaGrikhi Zabantwana
Futhi ekugcineni, kulesi sigaba sifaka konke okungenandawo esigabeni esithile.
Izinombolo eziyinhloko kusuka ku-1 kuye ku-10.000
Izinombolo zaseGibhithe kusuka ku-1 kuye ku-100
Amadolobha ayi-15 anabantu abaningi kakhulu eSpain
Imikhuleko yesithandwa ihambile
Izinombolo zamaRoma kusuka ku-1 kuye ku-1000
Amabutho ezempi ase-US
Izinombolo zeMayan kusuka ku-1 kuye ku-1000
Izinombolo ze-Aymara kusuka ku-1 kuye ku-100
Izinombolo zamaGuarani kusuka ku-1 kuye ku-100
Futhi yilokho kuphela! Sithemba ukuthi uyakujabulela ukuhlala kwakho e UniProyecta Futhi khumbula ukuthi uma unemibuzo noma izinkinga ungaxhumana nathi usebenzisa ifomu lokuxhumana noma esigabeni sokuphawula ekupheleni kwesifundo ngasinye. Sanibonani, inethiwekhi!
UniProyecta eyakho ikona lezamasiko nezemfundo mahhala ku-inthanethi. Funda izilimi futhi unelise ilukuluku lakho ngezindatshana nezifundo zakho.